फिल्म ‘चपली हाइट ३’मा स्वस्तिमाको इन्ट्री ? – Hot Post News
फिल्म ‘चपली हाइट ३’मा स्वस्तिमाको इन्ट्री ?
August 27, 2019 August 27, 2019 by onlinenews
काठमाडौं /चलचित्र ‘चपली हाइट’को तेस्रो सिरिज ‘चपली हाइट ३’ निर्माण हुने भएको छ । अर्जुन कुमारले निर्माण गर्ने यस चलचित्र को निर्माण घोषणा गर्ने तयारी चलिरहेको छ । यस चलचित्रलाई निकेश खड्काले निर्देशन गर्दै छन् । अर्जुन र निकेशले चलचित्र ‘फाटेको जुत्ता’मा सहकार्य गरेका थिए ।
चलचित्र निर्माण हुने पक्का भए पनि कलाकार र अन्य कुराको जानकारी भने बाहिर आएको छैन । यसै बिच यो वर्ष निकै सफलता पाउन सफल नायिका
स्वस्तिमा खड्काले एउटा सिक्वेल चलचित्रको कथा पढिरहेको र आफूलाई मन परेको बताएकी थिइन् ।तर, उनले चलचित्रको घोषणा चाडै नै हुने भन्दै नाम भने बताउन चाहेकी थिइनन् । स्वस्तिमाले पढेको चलचित्रको कथा चपली हाइटकै भएको कुरा बुझिएको छ ।साथै यो चलचित्रका लागि स्वस्तिमा फाइनल भएको खबर पनि बाहिरिएको छ । यद्यपि निर्माण पक्षले केही खुलाएको छैन ।
चलचित्र ‘चपली हाइट’को तेस्रो सिरिज ‘चपली हाइट ३’ निर्माण हुने भएको छ । अर्जुन कुमारले निर्माण गर्ने यस चलचित्र को निर्माण घोषणा गर्ने तयारी चलिरहेको छ । यस चलचित्रलाई निकेश खड्काले निर्देशन गर्दै छन् । अर्जुन र निकेशले चलचित्र ‘फाटेको जुत्ता’मा सहकार्य गरेका थिए ।
Prevबच्चा देखी बृद्ध सम्म फुलमाला लिएर पुगे चर्को घाममा (फोटो फिचर)
Nextअबको आवाज चर्को हुनेछ, झर्को नमान्नुहोला – रवि लामिछाने